Daawo: Fadeexo ka dhalatay dagaalkii Baled-Xaawo iyo dhaawacyadii qaar oo la dhameystiray – Hornafrik Media Network
Daawo: Fadeexo ka dhalatay dagaalkii Baled-Xaawo iyo dhaawacyadii qaar oo la dhameystiray
By Liibaan Nuur	 Last updated Jan 26, 2021
Dagaalkii kadhacey degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi dad gaar ah lagu beegsadey kadib markii ay DF dib ula wareegtay magaalada.
Ila wareedyo kusugan Demada Beled Xaawo ayaa sheegaya in ladhaawac tirey ciidamo katirsanaa maamulka Jubaland oo ku dhaawacmey dagaalka halka Qaar kale oo isla ciidanka jubaland ka tirsan la bedbaadiyey.
Col. Cabdullahi Dheere Teliyaha Hogaanka Dabagalka oo lagu tilmaamo Fileka madow ee MD Farmaajo ayaa lasheegey in uu amar ku bixiyey in la dhameystiro 13 askari oo ku dhaawacmey Dagaalka kana tirsanaa ciidamada Jubaland kadib markii ay isku soo dhiibeen ciidanka DF Soomaaliya, ayagoo dhaawacyo qaba si loo bedbaadiyo.
muuqaalo ay duubeen Askar katirsan ciidanka ilaalada shacabka ee sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo ka amar qaata Col. Cabdullahi Dheere ayaa qabsadey baraha bulshada,
Muuqaalka ayaa lagu dhex arkayey askar dhaawac ah oo dhuulka jiifa kuwaas oo xirxiran waxaana garaacayay ciidamada ilaalada shacabka oo markii dabe lasheegey in ay toogteen dhamaan ciidanka la garaaceyey hubkana ka qaateen.
Amarkan ayaa lasheegey in uu bixiyey Col. Dheere isagoo ku sifeeyey in ay cashar u tahay kuwa ka soo horjeeda Xukunka MD Farmaajo.
Dhica kale Col. Cabdullahi Dheere ayaa amar ku bixiyey in lasii daayo wadana ay ka baxaanna lashiiyo 35 askari oo Jubaland katirsanaa kuwaas oo ciidamada Dowlada Ku Xareereeyey bartamaha magaalada Beled Xaawo kadib markii laga itaal roonaadey ciidankii Jubaland oo ay lasocdeen.
Mid kamid ah saraakiishii dagaalka Hogaamineysey ayaa lasheegey in uu ka biyo diidey in ciidanka qaarna la toogto qaarna la fasaxo, waxaana loo taxaabey Xabsiga isagoo lagu eedeeyey in uu ku dhaqaaqey amar diido xilli dagaal socodo si ay noo xaqiijiyeen saraakiil katirsan Xoogga dalka oo magacooda qariyey.
Ilo Xog ogaal ah ayaa sheegaya in ciidanka lafasaxey ay ku heeb ahaayeen Col. Cabduullahi dheere halka kuwa latoogteyna la sheegey in ay kasoo jeedaan beelaha kale ee dega deeganada Jubaland.
Arrintaan ayaa fadeexad ku ah Ciidanka Qalabka sida ee soomaaliyeed in qaarna loo ugaarsado beel ahaan qaarna laheybsado oo la bedbaadiyo.
Si kastaba ha ahaatee majirto talaabo wali laga qaadey dadkii getstey xad gudub yadii ka Dhacey Beled Xaawo.
Xog: Sarkaal sare oo lagu eedeeyey Duqeymo lagu laayey dad shacab ah.